Ifulethi eliqashwayo le-2 Yokuqasha E-Horsham, eWest Sussex
Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » West Sussex » Horsham » Broadbridge Heath » Ifulethi eliqashwayo le-2 Yokuqasha E-Horsham, eWest Sussex1
United Kingdom, West Sussex, Horsham, Broadbridge Heath, Rh12 1ee
Isifinyezo Ukuvakasha Kwevidiyo Kuyatholakala ******* IChantry Court inikela ngokulingana okuphelele kokuzimela kokuzimela kwabangaphezu kweminyaka engama-50. Leli yifulethi lokugcina elisezingeni eliphansi le-Luxury First lingesinye sezikhulu ezimbalwa zezikhulu ezimangalisayo, ezisizakala kumabhalkhoni azimele abheke izinkundla zomphakathi. Lapho ungena, uzomangala kamnandi ngosayizi waleli gumbi elikhulu lokulala elinamabili, impahla yokugezela emibili, ukuphela kokugcina okuphezulu kanye nenqubo yokucabanga engene kuzo zonke izici zokwakhiwa kwempahla. Ukufaka i-TV / isibhakabhaka esifakwe egumbini lokuphumula nakuwo womabili amakamelo okulala, igesi yafaka ukufudumeza okungaphansi kuwo wonke amakamelo, ngalinye line-thermostat ngayinye, ikhabethe lesitoreji esikhulu ephaseji, uhlelo lokungena kwevidiyo nefoni ye-alamu, Insizakalo yokuphakamisa i-Plus kuzo zonke izitezi. ***** I-Video Tour Iyatholakala ******* IChantry Court inikeza ibhalansi ephelele yokuphila kokuzimela okunethezeka kwabangaphezu kweminyaka engama-50. Leli yifulethi lokugcina elisezingeni eliphansi le-Luxury First kungenye yenombolo encane kuphela, ehlomula emakhondeni azimele abheke izinkundla zomphakathi. Lapho ungena, uzomangala kamnandi ngosayizi waleli gumbi elikhulu lokulala elinamabili, impahla yokugezela emibili, ukuphela kokugcina okuphezulu kanye nenqubo yokucabanga engene kuzo zonke izici zokwakhiwa kwempahla. Ukufaka i-TV / isibhakabhaka esifakwe egumbini lokuphumula nakuwo womabili amagumbi okulala, igesi idonsa ukushisa okungaphansi kuwo wonke amakamelo, ngalinye linama-thermostat ngamanye, ikhabethe lesitoreji esikhulu ephaseji, uhlelo lokungena kwevidiyo ne-alamu. Onke amakamelo okuhlala abantu anezimpumputhe noma amakhethini , Igumbi lokulala eliphezulu elikhulu linobubanzi obugcwele, phansi kuya ophahleni olwakhiwe ekhabethe lezingubo, okuhambisana nokuhamba okukhulu eshaweni ukuze kufinyeleleke kalula, kanti ikamelo lokulala elikabili elikabili linendawo eningi yombhede ophindwe kabili nekhabethe elikhulu elime mahhala. Indlu yokugezela kanokusho ifakwe uthayela ngokuphelele kuyo yonke indawo emanzi enezimhlophe ezimataniswa nezingcezu ezintathu zangasese yokugezela kanye neshawa esilawulwa ngendlela efanelekile phezu kwendawo yokugezela.Le ndawo ihlomula ngesici esikhulu esiphindwe kabili sokuhlala / sokudlela esibheke izizathu zomphakathi ngokufinyelela ngqo kubhalkhoni wangasese. Ikhishi likanokusho elakhiwe ngokuphelele lenziwe ngayo yonke imishini ehlanganisiwe ezindaweni eziphakeme ezifinyeleleka kalula, izindawo zokusebenza zegranite, izibambo zeminyango eyehlisiwe futhi inesikhala setafula elincane nezihlalo.Nxa kwenziwa yonke imizamo efanelekile ukuqinisekisa ukunemba kwezincazelo nokuqukethwe, kufanele sikwazise ngalesi siqondiso noma ukulinganiselwa okulandelayo. (1) imithethonqubo yokwehliswa kwemali - abaqashi abazoba khona bazocelwa ukuthi bakhiqize imibhalo yokuhlonza ngesikhathi senqubo yokwenza inkomba futhi sizocela ukubambisana kwakho ukuze kungabikho ukubambezeleka (2) Le mininingwane ayiyona ingxenye noma konke okunikezwayo noma inkontileka. (3) Umbhalo, izithombe nezinhlelo kungokwesikhombisi kuphela futhi akuzona ngokuphelele. (4) Izilinganiso: Lezi zilinganiso zamakamelo cishe kuhloswe kuphela njengokuqondiswa okujwayelekile. Kufanele uqinisekise ubukhulu ngokucophelela ukuze uzenelise ngokunemba kwawo. (5) Kufanele uzenzele eyakho imibuzo mayelana nomhlaba, ikakhulukazi maqondana nempahla okufanele ifakwe / ingafakwa ngaphandle nokuthi yiziphi izindawo zokupaka ezitholakalayo. (6) Ngaphambi kokuthi ungene noma yikuphi ukuqashwa kwesinye sezakhiwo ezikhangisiwe, isimo nokuqukethwe yilo mpahla ngokujwayelekile kuzobekwa esivumelwaneni sokuqashisa nokufakwa kwempahla. Uyacelwa ukuthi uqiniseke ukuthi ufunda ngokucophelela futhi uyavumelana nesivumelwano sokuqashwa kwanoma yikuphi ukufakwa kwempahla okuhlinzekwe ngaphambi kokusayina le mibhalo.Yize kwenziwa yonke imizamo efanelekile yokuqinisekisa ukunemba kwezincazelo nokuqukethwe, kufanele sikwazise ngalesi siqondiso noma imikhawulo elandelayo. (1) imithethonqubo yokushushumbisa imali - abaqashi abazoba khona bazocelwa ukuthi bakhiqize imibhalo kamazisi ngesikhathi senqubo yokukhomba futhi sizocela ukubambisana kwakho ukuze kungabi khona ukubambezeleka ekuvumeni ukuqashwa. (2) Le mininingwane ayiyona ingxenye noma konke okunikezwayo noma inkontileka. (3) Umbhalo, izithombe nezinhlelo kungokwesikhombisi kuphela futhi akudingekile ukuthi kubanzi. (4) Izilinganiso: Lezi zilinganiso zamakamelo cishe zenzelwe kuphela ukuqondiswa okujwayelekile. Kufanele uqinisekise ubukhulu ngokucophelela ukuze uzenelise ngokunemba kwakho. (5) Kufanele ubuze owakho mayelana nomhlaba, ikakhulukazi maqondana nempahla okufanele ifakwe / ingafakwa ngaphandle nokuthi yiziphi izindawo zokupaka ezitholakalayo. (6) Ngaphambi kokungena kunoma yikuphi ukuqashwa kwesinye sezakhiwo ezikhangisiwe, isimo kanye nokuqukethwe yilo mpahla ngokujwayelekile kuzobekwa esivumelwaneni sokuqashwa kanye nasekusungulweni kwempahla. Uyacelwa ukuthi uqiniseke ukuthi ufunda ngokucophelela futhi uyavumelana nesivumelwano sokuqasha nanoma yiluphi uhla olunikezwe ngaphambi kokusayina le mibhalo.
31 Carfax, Horsham